Ny turnkey PCB sy ny mpiara-miasa amin'ny Assembly any China-Kingford
Serivisy fanamboarana antoka
Fahazarana PCB henjana
Mahay PCB metaly
Fitaovana PCB Assembly
Laboratoara fitiliana PCB
Fahafahana amin'ny PCB lava
Traikefa amin'ny fivoriambe PCB azo itokisana efa 20 taona mahery.
Vahaolana tokana ho an'ny fivoriambe OEM, PCBA ary turnkey
Fast Prototype PCB Assembly ao anatin'ny 7 andro
Tsipika 6 an'ny Yamaha SMT + Andalana fivorian'ny Thru-Hole 2
Traikefa azo itokisana efa 20 taona mahery.
High Mix, Low-Middle Volume PCB hatramin'ny 60 sosona
Fanamarinana kalitao miaraka amin'ny ISO 13485 sy IATF 16949
Rohy ny data miaraka amin'ireo mpamatsy ofisialy 1000+
100% vaovao sy azo zahana tany am-boalohany
Sourcing amin'ny singa 5.000.000+
Fanaraha-maso henjana sy fanaraha-maso kalitao
Rafitra manan-tsaina ho an'ny vahaolana 3D DFA / DFM
3 Minitra hamantarana ireo olana amin'ny PCBA alohan'ny famokarana.
Manome tatitra feno 3D DFA / DFM
Tohano ny loharanom-baovao CAD / Gerber Data
Famolavolana & famatsiana jig / fixtures mandeha ho azy
"Fanaraha-maso AOI, fizahana taratra X, fanandramana TIC,
Fitsapana FCT, fitsapana may "
Ny firaketana ny fitsapana sy ny valiny dia azo zahana
Injenieran'ny PCB Layout 30+
Max Layer No. 40, Hafainganam-pandeha Max: 56G
Min banga an'ny PIN BGA: 0.3mm, Min L / S: 3 / 3mils
iza i kingford
Nahoana no KINGFORD
SHENZHEN KINGFORD TECHNOLOGY CO., LIMITED dia orinasa manana teknolojia avo lenta miaraka amina PCBA manan-talenta amin'ny famokarana, manome endrika, famokarana ary singa PCB ho serivisy fanampiana ho an'ireo mpanjifantsika ho avy. Fikarohana tsy miankina sy fampandrosoana ny rafitra voalohany an'ny PCBA tsindry iray fipihana manan-tsaina izay azo vitaina ao anatin'ny 10 segondra PCB, BOM, sarany fanodinana, zavamaniry manan-tsaina mifamatotra miaraka amin'ny rojom-baravarana mba hahatratrarana filaharana haingana ao anatin'ny 3 minitra ary 1-2 herinandro ny fandefasana haingana.
● traikefa azo itokisana efa 20 taona mahery.
● Manana rafitra DFM marani-tsaina hampihenana ny fotoana anaovana prototype sy hampiakarana ny fahombiazan'ny R&D.
● Serivisy fijanonana tokana, fanamboarana sy fivoriambe PCB, Sourcing momba ny singa, fandaharana IC ary serivisy fitsapana.
● Tsy misy fangatahana MOQ, Mifantoha amin'ny habetsahan'ny Mix, Low sy Medium.
● Manome serivisy an-tserasera 24 ora.
● Ny serivisy santionany dia ao anatin'ny 7 andro fiasana!
● 2018 — Fanokafana ny orinasa mpanamboatra Shenzhen PCBA & Turnkey.
● 2016 — Fanokafana ny orinasa mpamokatra Hubei PCBA & Turnkey.
● 2012 — Manitatra orinasa amin'ny orinasa PCBA & Turnkey.
● 2009 — Fanokafana ny orinasa mpamorona pcb aluminium Meizhou.
● 2005 — Fanamarinana tratry ny IATF16949, ISO13485, ISO9001, ISO14001, UL ， IPC.
● 2004 — Fanokafana ny ozinina Kingford PCB- (Teknolojia tsara) any Huizhou.
● 1999 - Teknolojia Kingford napetraka.
Hatsarao hatrany ny haavon'ny fitantanana hanomezana toky ny mpanjifa.
Fehezo tsara arakaraka ny fenitra IPC mba hiantohana ny tahan'ny kalitaon'ny fandefasana 100%.
√ UL (E352816) √ Mpikambana IPC
Fahitana: Ho naman'ny mpanjifa manerantany. Manome sanda ambony indrindra ho an'ny mpanjifa, ny mpiasa ary ny tompon-trosa.
Iraka: Manome serivisy avo lenta sy ara-potoana ary mahafa-po amin'ny famokarana sy fivoriambe PCB.
Kingford dia manohana ny mpanjifa ary manome azy ireo vahaolana amin'ny serivisy ho an'ny androm-piainan'ny vokatra manontolo ny singa sy rafitra elektronika. Manana ny fahaiza-manao sy ny fahaizana ilaina rehetra izahay hanoro hevitra ny mpanjifa momba ny olana momba ny fitantanana teknolojia, manomboka amin'ny fiandohan'ny dingana famolavolana ny vokatra ka hatramin'ny fampidirana ny fiafaran'ny fiainana ny vokatra; ary manao izany isika amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny vidin'ny fananana farany tsara indrindra.
Ny antony iraisana amin'ny fidradradradrana amin'ny famatsiana herinaratra (2)
Inona ny fizotry ny famokarana PCB Assembly
Abstract: Ao amin'ny dingan'ny famokarana PCB Assembly, mpamokatra maro ...
Inona no atao hoe Passive Components ho an'ny PCBA?
Abstract: Ireo singa passive dia afaka manondro singa elektronika ...
Ampahafantaro ny firoboroboan'ny indostrian'ny smt ao amin'ny fivorian'ny SMT PCB
Abstract: SMT PCB fivoriambe dia antsoina hoe ambonin-tendrombohitra na ambonin'ny tendrombohitra ...
Inona ireo fitsipika tokony harahina amin'ny tabilao fanaovana kopia pcb
Abstract: Asa manahirana be ny maka tahaka PCB. Raha tsy carefu ianao ...
Inona avy ireo fanasokajiana samihafa amin'ny takelaka PCB?
Abstract: ny takelaka PCB no fitaovana fototra, izay vita amin'ny farany ...
Torohevitra vitsivitsy hanatsarana ny fanaparitahana hafanana PCB ho an'ny fampisehoana LED
Abstract: Hita eny rehetra eny ny LED, koa inona avy ireo teknika f ...
Inona avy ireo fitsipika tokony harahina amin'ny famakafakana serivisy DFM?
1 | Fanodinana Ny fizotry ny famokarana voafantina dia tokony ho ...
Ireo anton-javatra misy fiatraikany amin'ny fanadihadiana DFM sy ny fomba famahana azy ireo.
Ny tanjon'ny DFM dia ny hampihenana ny vidin'ny famokarana nefa tsy misy ny marimaritra iraisana ...
Inona ny endrika ho an'ny famokarana ao amin'ny PCB Assembly?
Fampidirana i. Volavola famokarana: Androany, organisatio ...
Mihoatra ny indray mandeha izahay dia nandidy ny fivorian'ny tabilao misy pirinty avy amin'ny KINGFORD Fametrahana smd sy dip. Isaky ny mahazo tabilao tsara kalitao izahay. Tsy nisy mihitsy fanambadiana. Mahafinaritra indrindra ny fanatanterahana ny filaminana ara-potoana hatrany. Tonga ara-potoana ny zava-drehetra, noho izany dia tsy tokony hahemotra ireo fe-potoana farany nomenao
Misafidy mpandraharaha iray, nifantoka tamin'ny traikefa sy ny maha matihanina an'ny ho avy mpiara-miasa izahay. Ny KINGFORD dia nahatanteraka tanteraka ny fanantenanay tamin'ny fandaminana ny fividianana singa, ny famokarana ary ny fanangonana ireo takelaka fanaovana pirinty. Manantena izahay fa hisy fiaraha-miasa mahomby kokoa!
Adress: Rihana faha-3, tranobe A1, Faritra indostrialy fahatelo any Fuqiao, Fuyong, Distrikan'i Bao'an, Shenzhen, Sina
Telefaona: + 86-18929306972
Ho an'ny serivisy Assembly dia angatahinay ny mpanjifa hanome rakitra BOM & Gerber, ilaina izany mba hanomezana vidiny marina ary koa ho an'ny vidin'ny fivorian'ny PCB. sales@kingfordpcb.com
Ny PCB turnkey & mpiara-miasa aminao ao Shina